Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni – Isambane News
Home > Featured > Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni
Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni
October 6, 2016 Isambane News
Ihhovisi lika Sotswebhu eliholwa ngu Mhlonishwa Nontembeko Boyce njengo Sotswebhu omkhulu kanye no Sekela Sotswebhu uMhlonishwa Mdumiseni Ntuli liye labona ukwehla kwezinga lokuphasa kanye no dlambedlu ezikoleni zakwa Ximba ku ward 1 nokwaholela ekutheni esinye sazo sime nse ukufunda. Lelihhovisi libe selingenelela ukuzama ukudambisa isimo kulezikole, lase lihlela uhlelo lokwelulekwa kwabafundi, baphinde banikwe isikhathi esengeziwe sokufunda belekelelwa ngongoti bezifundo ezehlukene. Umnyango wezenhlalakahle￼ nawo ufake isandla ngokujuba osonhlalakahle ukubonisana nabafundi ngendlela yokuziphatha nabaphinde bagqugquzela ukuziqhelanisa nezidakamizwa.
Ihhovisi lika Sotswebhu liye lathuma uMhlonishwa uVusi Dube, Mhlonishwa Mlaba kanye Nomhlonishwa u Ntuli ukuthi babe yingxenye yokuqala kohlelo lokufunda namuhla noluqale ngokuvuselela unembeza nokuthaza ukuzinikela nokuziphatha ngendlela kwabafundi. Lomcimbi uhanjelwe ngu sekela somlomo esifundazweni nogqugquzele inhlonipho kubafundi. Loluhlelo lwethulwe ngu Siya Mhlongo wodumo lwezokwelapha izinhliziyo nongumsakazi oKhozini FM kanye no Mnu Themba Mkhize.
Inhlangano ebusayo kuleli ANC esifundeni seTheku nasegatsheni lakwaXimba ikhombise ukusithakasela lesi sinyathelo yase izinikela ukuqinisekisa ukuthi abantwana banikezelwa ngezinto zokuthutha ukuze bafike ngesikhathi ezikoleni.
Phambilini inkosi yesizwe sakwaMlaba ikhombise ukulweseka loluhlelo yase ikhuthaza abantu abakhele isizwe sakwaXimba ukuthi babeseke abantwana babo ukuqinisekisa ukuthi izikole okungu Mdepha, St Julius, Luphaphe kanye ne Zizamele zibuyela esimweni esejwayelekile ngokwezinga lokuphasa
Charlerstown Rural Housing Project has been launched officially
Durban Mayor Zandile Gumede attended a preparation meeting for South Africa’s delegation to Habitat III breakfast yesterday.